नेपालको पाँच तारे होटलको एक दिनको मुल्य कति? « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
नेपालको पाँच तारे होटलको एक दिनको मुल्य कति?
काठमाडौं, २४ फागुन । काठमाडौंमा मात्र पाँच तारे होटलको सङ्ख्या १० वटा भन्दा बढी छ । जसमध्ये २ वटा अहिले बन्द अवस्थामा छ । होटल व्यवसाय ग्लामरस तथा आम्दानी र लगानीको हिसाबले पनि राम्रो हुने भएकोले पछिल्लो समय व्यावसायीहरु यस क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेका छन् ।
आजभोली इभेन्ट, फङसन, र विभिन्न कार्यक्रमहरु पाचँतारे होटलमा गर्ने चलन बढेर गएको छ । यी सुविधासम्पन्न, लक्जरियस होटलमा कार्यक्रम गर्न दिनको कति खर्च लाग्छ भनेर हामीले यहाँ सूची बनाएका छौ । मुख्यत: कार्यक्रमको आकँडा हेरेर बजेट निकालिने भएकोले यहाँ हामीले होटलले लिने प्रति दिनको न्युनतम मुल्यलाई मात्र उल्लेख गरेका छौ-
1. होटल मल्ल
काठमाडौंको ठमेलमा रहेको पाँच तारे होटल मल्ल सुविधासम्पन्न होटल हो । सदाबाहार भरिभराउ हुने उक्त होटलमा पर्यटकका लागि सवै सेवा सुविधा उपलव्ध रहेका छन् । पर्यटको लागि एकरातको १९ हजार ६ सय ३९ रुपैयाँ रहेको छ ।
2. हायत होटल
हायत रिजेन्सी होटल काठमाडौंको बौद्धमा रहेको छ । पर्यटकको लागि एक रातको १८ हजार ६ सय ९७ रुपैयाँ पर्दछ । नेपालको लक्जरी होटलको सूचीमा रहेको हायत रिजेन्सी पनि चेन होटल हो ।
3. याक एन्ड यति
काठमाडौंको दरबार मार्गमा अवस्थित होटल याक एन्ड यति होटल चर्चित पाँच तारे होटल हो । सबै सेवा सुविधासम्पन्न होटल पर्यटकले सदाबहार भरिभराऊ हुने गर्छ । होटलमा पर्यटकले १३ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँ रुम पाउने छन् ।
4 . होटल सोल्टी
नेपालमा सबैभन्दा राम्रो र सुविधासम्पन्न पाँचतारे होटलको सूचीमा रहेको क्राउन प्लजा सोल्टी काठमाडौंको हो । नेपालमा आउने ठूला भीभीआइपीहरु बस्नको लागि बढी प्रयोग हुने उक्त होटलमा विश्वमा पाइने सवै प्रकारका सेवा सुविधा छन् ।
धेरैलाई लाग्न सक्छ त्यहाँ बस्न सकिदैन । तर सोल्टी होटलमा पनि एकरातको १३ हजार ३ सय ४५ रुपैयाँ तिर्ने हो भने बस्न सकिन्छ । सबैभन्दा सस्तो रुम १३ हजार ३ सय ४५ रुपैयाँबाट सुरु हुने उक्त होटलमा ५० हजार रुपैयाँ पर्ने रुम समेत रहेको छ ।
5. होटल अन्नपूर्ण
दरबारमार्गमा रहेको होटल अन्नपूर्ण होटल पाँच तारे होटल हो । सुविधासम्पन्न उक्त अन्नपूर्ण होटलमा पर्यटकलाई एकरातको १२ हजार ९ सय ७१ रुपैयाँ रहेको छ ।
6. साँग्रिला होटल
काठमाडौंको लाजिम्पाटमा रहेको साँग्रिला होटल पाँच तारे सुविधासम्पन्न होटल हो । सदाबाहार पर्यटकले भरिभराऊ हुने उक्त होटल पनि सबै प्रकारका सुविधाहरु पाउन सकिन्छ । साँग्रिला होटलमा एकरातको १२ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ प्रतिरातको तिर्नुपिर्ने हुन्छ ।
7. र्याडिसन होटल काठमाडौं
लाजिम्पाट स्थित र्याडिसन चेन होटल हो । सबै सेवा सुविधासम्पन्न रहेको उक्त होटलमा पर्यटकको लागि १२ हजार १ सय १८ रुपैयाँ पर्दछ ।